Obodo nke narị afọ nke 101st: iwu nke akụrụngwa XNUMX - Geofumadas
Obodo nke narị afọ nke 101st: ihe owuwu ihe owuwu XNUMX
Julaị, 2020 Engineering, ọtụtụ
Ngwunye ọkụ bụ ihe a na-achọkarị taa. Anyị na-echekarị maka obodo ukwu ma ọ bụ dijitalụ na gburugburu nke obodo ukwu nwere ọtụtụ ndị bi na ọtụtụ ọrụ metụtara obodo ukwu. Agbanyeghị, obere ebe na-achọ akụrụngwa. Eziokwu ahụ bụ na ọ bụghị ala ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile na-akwụsị na mpaghara mpaghara, kamakwa na-agbatị aka na gọọmentị etiti, nke mpaghara na nke mba, ọ na - apụta na mberede: la Akụrụngwa bụ ihe doro anya emebi iwu, ọ dị mkpa.
Echiche nke anyị nwere ike ịhụ ebe ndị mara mma naanị n'etiti oghere mpaghara pere mpe bụ ihe na-ezighi ezi. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana iwu iwu nchịkwa ozi, ihe omume, ihe eji arụpụta ihe, yana nchekwa ndị mmadụ na ewu ụlọ na-agafekarị obere ma nnukwu ebe. Enwere mpempe akwụkwọ ebe ebumnuche GIS na BIM.
Teknụzụ nwere usoro gafere ókè, mana iwu GIS na BIM enwebeghị ike iji ya na mmetụta ha kacha elu.
Anyị na-akpọbu ihe mgbochi a ma ọ bụ akwa stovu. Ngwa GIS na BIM izizi gbanyere mkpọrọgwụ na mpaghara ụfọdụ, nke kachasị njọ bụ ndị nwere data na-achịkwa ọrụ ahụ ma ghara itinye onwe ha n'ime ụwa maka egwu ịghara ịchịkwa. Ọ dabara nke ọma, nke a agbanweela ọtụtụ ihe - ọ bụghịkwa maka ezi uche dị na ya mmadụ ga-eche. N'adịghị ka echiche ndị mmadụ ga-achọpụta ihe mgbochi mgbanwe GIS na BIM dị n'otu wee họrọ ịkekọrịta, ị ga - ahụ ihe ndị ọzọ na - agbanwe. Ndị a gụnyere:
Movekwaga na ngwanrọ na ngwanrọ na ngwa emerela “ịdị mfe nke iji” na-akụda oke ma na-enye onye ọ bụla nghọta ihe enwere ike iji. Enwere ụlọ nkwakọba data dị ole na ole na-echekwa nke ọma, a na-ahọrọ ngwa mgbakwunye iji wuo ma jikọọ data. Nke a n'aka nke a emeela ka anyị nwekwuo echiche iche echiche, na mmepe nke ọrụ ndị a na-ekerịta aghọwo nke siri ike ma nwekwa ike ịdabere na ya.
Agagharị emeela ka njikọ dị n'etiti ngwa na ọfịs. Na mberede, onye nọ na ogo latitude 60 nwere ike ịkekọrịta data ma jikọta ya na sistemụ data dị elu na onye ọzọ na ogo 10 latitude, enweghị nsogbu ọ bụla. Ekwentị mkpanaaka na-agbanwe ma na-egbochi ihe ndị mmadụ na-egbochi, na-akwado ndị otu na otu netwọkụ sara mbara.
Enwere ike ịgbagha na ọrụ mmepe mbụ na-eji BIM na GIS etinye ọnụ na iji otu teknụzụ na nke ọzọ. Kindsdị arụmụka ndị ahụ banyere ụzọ gara aga na ikpo okwu desktọọpụ gbagọrọ ndụ nke ndị na-eche echiche na ndị na-eme ya, ndị na-achọ ịgbaso usoro na ụzọ ọhụrụ, a na-akpọkwa ya dị ka ndị isi oru ngo na-agbanwe ihe ọhụrụ. Eziokwu bụ na akụrụngwa nke taa abụghị naanị dabere na GIS na BIM, mana mgbanwe ndị ọzọ na teknụzụ ndị ọzọ. Ebumnuche taa bụ iwebata ha, na-achọ ịchọpụta ebe a ga-esi jiri ya na ọ bụrụ na ha na-enye arụmọrụ na arụmọrụ ka ukwuu. Ihe ndị a bụ ụfọdụ ihe kpatara na etu GIS na teknụzụ GIS si na-enweta ọkwa ihe ịga nke ọma ugbu a.
Ofwa nke ọgụgụ isi mmadụ (AI) dị na mbara ala nke chọrọ ịgụnye GIS na BIM na ngwakọta maka ndị na-emepụta akụrụngwa, ndị na-ewu ụlọ, ndị ọrụ na otu ndị na-achọ iji nọgide na-enwe akụrụngwa. Mgbe ufodu, odi ka AI na enwe ike itughari uche na mkparita uka ndi a nke na o yiri ihe dicha nnoo na udiri ya. Agbanyeghị, ka gị na ndị ọkachamara AI na-ekwu, ị nwere ike ịnụkarị na mmetụta nke AI na-abụkarị nke ọma maka ịghọta enweghị ntụkwasị obi.
AI nwere ike inye azịza ma ebumnuche ya na-apụtakarị ihe arụmọrụ akụrụngwa - arụmọrụ ka mma. Agbanyeghị, ebumnuche ha bụ n'ụzọ dị ukwuu iji belata ejighị n'aka, si otú a na-abawanye arụmọrụ.
Dịka GPS nyeere aka iwelie ojiji ọnọdụ n'ọtụtụ ngwa, ọ nweghị ike ịgwa gị, dịka ọmụmaatụ, na ụzọ ị na-aga ga-ahụ na ị ga-erute ebe ị ga-eriru n'otu nkeji. Otutu obi anaghi adi na ngwa GPS, n’agbanyeghi na anyi maara ebe anyi no. N'otu aka ahụ, n'ihe gbasara saịtị ndị na-ewu ụlọ, AI ga-ahụ oge igbu oge n'ihe, iku ihe, ma ọ bụ ihu igwe adịghị mma. Site na iji mgbanwe mgbanwe ihu igwe, onye maara ma ịnweta mmiri ga-agbanwe ma ọ bụ na ọ gaghị, ikuku maka ọgbọ ikuku ga-abawanye ma ọ bụ belata ma ọ bụ ọ bụrụ na usoro ebili mmiri nwere ike ịbụ ọgbọ a kacha eji eme ihe ọbụlagodi na ọdọ mmiri mpaghara.
Isi okwu a bụ - GIS na BIM enweela ọganiihu na-aga n’ihu kemgbe ọtụtụ iri afọ. N’oge a, ọtụtụ ihe anyị mụtara ma mara amara agbanweela ga-agbanwe. Obodo Smart na akụrụngwa dijitalụ na-abanye na usoro a na-enweta ihe ọmụma. Njikọ nke ndị sonyere na mmepe akụrụngwa na arụmọrụ na-agbasawanye n'otu oge. Anyị ga-enwe mkpa ịlele ihe arụ ọrụ na-ejighi n'aka na ihe a na-enyocha, ịtụle ya sara mbara, wee bido imepụta ngwaọrụ nke ọ bụghị naanị ịkọwa na ịtụle ihe dị anyị mkpa maka arụmọrụ, mana ihe anyị ga-aghọta site na anyị amaghị maka ọrụ enyere anyị. Nke a bụ ihe dị ka ịghọta ọrụ gbasara data gbasara ya Erogbọ elu.
N'ọnọdụ ọ bụla, buru n'uche na obodo ndị nwere ọgụgụ isi na ejima dijitalụ abụghị naanị maka nnukwu ihe ịga nke ọma n'obodo, kamakwa maka ndị nọ na obere ebe, dị ka ebe nri si na ebe ụgbọ oloko na-esikarị, ugbo elu na ugbo ala. Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịmara ọtụtụ ndị ọkachamara ihe owuwu na-ebi na mpụga nnukwu obodo taa, nri?
Banyere Onye chepụtara ya
Jeff Thurston bụ ọkachamara Canada GIS ma bụrụkwa onye nchịkọta akụkọ mbipụta akwụkwọ geospatial na Europe. Ọ dabeere na Berlin, Germany.
Previous Post«Previous Geomatics na Earth Sciences na 2050
Next Post GRAPHISOFT na-agbasa BIMcloud dị ka ọrụ maka nnweta ụwaOsote "
Dị mfe dịka ịhụ onye ọkachamara si zụlite ụlọ - kọwara nzọụkwụ site na nzọụkwụ Mụta AutoDesk Revit n'ụzọ dị mfe ....
Budata data okpomọkụ na mmiri ozuzo site na ụwa ọ bụla site na iji Google Earth
30 GIS Ngwa
Ndụmọdụ na aghụghọ maka ịrụ ọrụ na akụkọ ifo na ArcGIS Pro
Nyochaa Uru Ahụ Ike Ọgụgụ nke Green Spaces Iji GIS
QGIS na ngwa mkpanaaka na-akwụghị ụgwọ
Oge awa 32 nke vidiyo - 100% n'ịntanetị
N'asụsụ gị - 100% online